Hong Kong: ‘Raha Afaka Mampirafy Ny Lehilahy? Nahoana Kosa Ny Vehivavy No Tsia ?’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2013 12:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, srpski, Italiano, English
Mba hiatrehana ny olana ara-moraly avy amin'ny fomba fijerim-behivavy sy mpandala ny maha-vehivavy, dia nanadihadian'i N Chan, mpanao gazety mpanangom-baovao ho an'ny median'olon-tsotra inmediahk.net i Miss T, ilay “mpitady fijangajangàna (Fanamarihana: “te-hiodina” hoy ny Malagasy)” , sy mpandala ny maha-vehivavy ao an-toerana Lee Wai Yee, mikasika ny kolontsain'ny resaka firaisana ara-nofo ao Hong Kong. Tamin'ny teny Sinoa no namoahana ilay lahatsoratra voalohany ny 29 Oktobra 2013. Ity nafohezina amin'ny teny Anglisy ity kosa dia nadikan'i Loh Yuen Ching ary naverin'ny Global Voices navoaka araky ny fifanarahana fifampizarana rakitra.
Lasa lohahevitra vaovao mafana dia mafana ao Hong Kong tato ho ato ny resaka fijangajangana hatramin'izay nisokafan'ilay vohikala fampihaonana olon-droa Ashley Madison izay. Misy ireo nanakiana ilay vohikala noho ny famporisihany ny olona ho amin'ny fijangajangana, ao koa ireo nanamarika fa miha-mitombo hatrany ireo vehivavy mitady raharaha (te-hiodina) ao, izay ho lasa mpampiasa mavitrika io sehatra io.
Efa manana fiarahana milamina tsara i Ms T, kanefa mbola mikatsaka hatrany olona samihafa ho amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Nilaza izy fa maro be ny vohikalan'olon-dehibe ao Hong Kong izay mamatsy tolotra ho an'ireo izay “te-hiodina”. Maro amin'ireo vehivavy no milaza mibaribary ny fitadiavan'izy ireo olona hiarahana amin'n resaka firaisana ara-nofo fotsiny any amin'ireo sehatra natokana ho an'ny olon-dehibe Hong Kong Forum sy ao amin'ny Uwants. Misy amin'ireo sehatra sasany aza dia natokana ho amin'izany mihitsy, toy ny Adult Friend Finder. Ary azon'ireo olona tena saro-kenatra atao koa ny mampiasa tsara ireo efitra firesahana manokana sy ny “applications” anaty finday.
Raha te-hiodina ianao, tsotra toy ny fikitihana ny smartphone anao izany- “Shake” (na kitio) dia ilay “application” anaty finday, tolotra fandefasana hafatra an-tsoratra na feo an'i Wechat izay mampifandray anao aminà mpampiasa hafa, izay manodidina ny 100 metatra. Natao hitadiavana namana sy olon-tiana moa io sehatra iray io.
Ny tena marina, raha tokony antsoina hoe vohikala fampihaonan'olon-droa ny Ashley Madison, ny filazam-baovao ao an-toerana kosa niantso azy hoe “vohikalan'ny fijangajangana “. Tamin'ny andro nisokafany voalohany, nahitàna lehilahy 14.000 sy vehivavy 7.500 nanoratra anarana tao. Noho ny habetsahan'ny isan'ny lehilahy ao amin'io vohikala io mitaha amin'ny vehivavy, sarotra noho izany ny hanohana ilay resaka mandeha hoe ny fisiany dia handrisika ireo vehivavy hampirafy, ary dia nampian'ireo gazety an'ilay resaka fiakarana 20 isan-jaton'ny isan'ireo lehilahy mangataka soso-kevitra amin'ny tokony hataony noho ny fiarahan'ny vadin'izy ireo amin'olon-kafa ivelan'ny tokantrano ihany koa izany.
ny fampirafesana dia fomba mamohehatra hitovizan’ny olona sy ny biby ary ny lehilahy no mpanao azy. Fanontaniana ary ianareo vehivavy napetraka ho manankasina noho ny lehilahy koa ve te ho very hasina ka hoe atao tsy mampaninona na mampirafy aza?
03 Oktobra 2018, 12:33
Hiresaka koa -> napoly